Barcelona ayaa ugu dambayn ka badbaaday inay ku dhawaaqo inay noqotay koox kacday oo musalaftay, kaddib markii ay il naxariisle ka heshay xiddigaheeda oo muddo ay isku mari la’aayeen inay ogolaadaan in €122 milyan oo Gini oo mushaharkooda ah ay ka tanaasulaan sannadkan.
Kooxda reer Spain ayaa ku jirtay xaalad dhaqaale xumo oo aad u ba’an, waxaanay ku qasbanayd inay si aad ah hoos ugu dhigto mushaharka ciyaartoydeeda iyo shaqaalaha intaba, si ay u xaqiijiso in lacag ka badan €170 milyan oo Gini oo aanay jirin meel ay ka bixiso ay ugu badbaadaan.
LaLiga oo dhowaan shaaciyey jaangoynta mushaharooyinka kooxaha ayaa waxa Barcelona lagu wargeliyey in kaliya loo ogol yahay inay mushahar ahaan u bixin karaan ku dhowaad kala-badh intii ay hore ciyaartoydeeda u siin jirtay, taas oo xaalad dhako-faar ah ku ridday kooxdan beryaha qaarkood cududda dhaqaale ku faani jirtay.
Laba bilood oo ciyaartoygeeda ay isku maan-dhaafsanaayeen inay ogolaadaan inay mushahar dhimis 40% (boqolkiiba afartan) ah sameeyaan, waxay kooxdu xaqiijisay inay gaadheen heshiis buuxa oo ciyaaryahannadeedu ay ku ogolaadeen inay mushaharkooda ka dhimaan €122 milyan oo Euro.
Laakiin waxa wali kooxdu ay raadinaysaa meel ay ka dhinto lacag kale oo aanay jirin meel ay ka bixiso oo dhan €50 milyan oo Euro oo kale.
Warbaahinta Spain ayaa shaacisay in kooxda reer Spain ay hadda raadinayso ilo kale oo ay ka dhinto €50-ka milyan ee Gini ee kale, laakiin lama caddaynin halka ay noqon karayso.
Si kastaba, warka farxadda u ah jamaahiirta ayaa waxa uu yahay in Barcelona ay ka badbaaday inay shaaciso inay ku dhowaaqdo inay musalaftay, taas oo ku qasbi lahayd inay dawladdu soo faro-geliso, isla markaana xiddigaha waaweyn laga xaraasho taas oo iyaduna dhibaato kale sii gelin lahayd.